Slimbook Titan: chikara chitsva chemitambo kubva kuSpanish brand | Linux Vakapindwa muropa
Nezvose zvikuru zvigadzirwa zvakave zvakatangwa munguva yakapfuura, ndinofunga kuti hazvisisina basa kuratidza kambani yeValencian sepakutanga. Slimbook inozivikanwa mukati nekunze kwemiganhu yedu. Uye ndizvozvo nekutenda kumatafura avo anonakidza uye malaptop atakataura nezvawo kakawanda kuLxA. Kune vese ivo vanofanirwa kuwedzerwa zita idzva iro richabatanidzwa mumhuri huru: Titan.
Uye kana, Titan mutambo wemitambo, wevanofarira, Achirumbidza zita rake rine simba. Kuzadza iyo isina chinhu uye kugutsa vese avo vashandisi vanoda kuita kwakanyanya kwemitambo yemavhidhiyo kana kune mamwe mabasa panodiwa zviwanikwa zvehardware.
Uye ndevapi hunhu Chii chinoita kuti Slimbook Titan ive yakakosha? Zvakanaka, ngatione zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa:
AMD Ryzen 7 5800H (ine Radeon 8 Renoir iGPU)
Zita rekodhi: Cezanne
SMT: Ehe, shinda gumi neshanu
Zita rezita: 3.2 Ghz
Turbo Kore: 4.4 Ghz
Cache Memory: 16MB yakagovaniswa L3, 4MB L2 yakabatana (512KB pamusoro), IL1 + DL1 256KB + 256KB (32KB + 32KB x8).
Nzira dzePCI: 12
Unyanzvi: 16GB kusvika 64GB
Type: DDR4 3200Mhz.
Graphics memory: 8GB GDDR6 256-bit uye bandwidth inosvika 448.00 GB / s
GPU: Ampere (GA104-300) ine 20.31 TFLOPS
Kakawanda: 1.5 Ghz (1.725 Ghz turbo modhi)
Shader: 5888 CUDA cores
Makore eRay Kutsvaga: 46
Tensor Makore: 184
Vape Units: 96
Mutauro: PCIe 4.0 x16
Primary Hard Drive (M.2 NVMe PCIe SSD): 512GB kusvika 2TB
Sekondari hard drive (M.2 NVMe PCIe SSD): unogona kusiya slot isina chinhu, kutumira hard drive yako, kana kusarudza kukwira imwe kubva pa250GB kusvika pa2TB.
RAID: mukana wekusarudza RAID 0 (Striping) uye RAID 1 (Mirror) kumisikidzwa.
15.6 ″ remadziro
Kugadziriswa: QHD kana 2.5K (2560x1440px)
Zororo rekuvandudza: 165 Hz.
Unyanzvi: 6 maseru uye 93.4Wh yekuzvimiririra kukuru.
Marongerwo: unogona kusarudza keyboard muSpanish (yemakiyi makuru es_ES), Briteni English (en_UK), American English (en_US), ChiGerman (de_DE) nevamwe.
Type: opto-mechanical makiyi, aine akazara keyboard + manhamba keypad uye turbo mode yekuwana mabhatani
Backlight: RGB (mavara e-LED) pane yega kiyi. Zvakare inosanganisira kumberi RGB Lightbar. Zvakare, mwenje inogona kudzimwa kubva kuBIOS / UEFI.
Vatauri vane THX kurira
Webcam uye infrared kamera kuvhura yako distro nekuona kumeso.
Zviteshi uye kubatana:
WiFi 6 (IEEE 802.11ax) ine 2.5Gbps kiredhiti kadhi
3x USB 3.0 zviteshi
1x USB-C ine vhidhiyo kuburitsa kune ekunze ekuratidzira
Chinyorwa: yepamusoro aruminiyamu chassis.
Unogona kusarudza pasina chero
Neyaunofarira GNU / Linux distro.
Uye kunyangwe mbiri-bhutsu ine Microsoft Windows 10 Kumba / Pro 64-bit.
Muchiitiko cheLinux, iwe unogona zvakare kuraira pendrive ye € 9.
Mutengo: kubva ku € 1750 (pre-kutenga nechipo che € 1599)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Slimbook Titan: iyo mhuka nyowani yekutamba kubva kuSpanish brand
AMD inozivikanwa kunge yakachipa pane Intel uye kune zvikwata zvinokwira iyo RTX3070 pane i7, pamutengo wakafanana. Chero zvazvingaitika, zvinoita kunge mutengo wakanyanyisa we laptop inotaridzika senge ultrabook (~ 22mm), inozokuvadzwa nekupisa uye kuti nekuda kwealuminium haugone kuiisa pamakumbo ako.
Ichokwadi ine bhatiri rakakura uye skrini ine yakanaka resolution uye yekuzorodza, asi haitaure chero chinhu nezve iyo nits uye kana iyo RAM iri imwechete socket kana mbiri nzira (8GBx2).
Ini ndinoda zano remhando dzinotsigira Linux asi dzinonyanya kudhura. : - /
Ichi hachisi chinyorwa, chiziviso chiri nyore chechigadzirwa, pasina bvunzo dzehardware kana makomendi pairi. :?
1st Tarisa tsananguro ye «chinyorwa».
2º Muchinyorwa, nekuti ndizvo, bvunzo hadzina kukurukurwa nekuti chete nhau dzekuburitswa kwechigadzirwa chitsva dziri kuratidzwa. Hapana chimwe…
3º Zvakaoma kuva neyuniti yechigadzirwa chiri pre-sale. Uye kunyangwe mamwe makambani achitumira sampu mayuniti ezvimwe zvigadzirwa, izvi zvave zvisiri izvo mune ino kesi
4th ini handifunge kuti avo vanonyatsofarira kudzidza nezveTitan vachanetswa nechinyorwa chino.
Asi iwe wakanzwisisa zvandaitaura, hongu.
Pane zvimwe zvakadzama zviri zvakanyanya kukosha tisingataure nezvavo, uye kuti zvinosuruvarisa kuti hazvizivikanwe mune zvirevo zvepamutemo, asi kuti nekubvunza mumaforamu iwe unogona kuona:
4 USB 3.2 madoko:
* Iyo iri kuruboshwe ndeye Type A / gen. 2 (10 Gb / s)
* Iko kumashure ndeye Type C / gen. 2 (10 Gb / s) uye DisplayPort
* Iwo maviri ari kurudyi Rudzi A / Gen.2 (1 Gb / s)
2 yemukati M.2 PCIe 3.0 madoko ku4x (ingangoita 4 GByte / s)
1 HDMI 2.1 chiteshi (48 Gb / s)
1 Ethernet chiteshi pa2.5 Gb / s
Chaizvoizvo, kana ukachienzanisa nemhando dzinozivikanwa kwazvo (Asus, nezvimwewo) uye pamutengo uyu, unogona kuona kuti aya mabhureki haabatanidzi chero eaya maitiro.
Tarira: Nguva pfupi mushure mekunge vaburitsa izvi uye dzimwe ongororo, ivo vakagadzirisa CPU yeiyi laptop neRenzen 9 5900hx